बजेट सुझाव मा युरोप मा यात्रा | एक ट्रेन सेव
घर > ट्रेन यात्रा सल्लाह > बजेट सुझाव मा युरोप मा यात्रा
बजेट सुझाव मा युरोप मा यात्रा
पढ्ने समय:4मिनेट(Last Updated On: 10/04/2021)
बजेट मा युरोप मा यात्रा एक चुनौती हो! तथापि, यो रूपमा लामो तपाईं आफ्नो अनुसन्धान गर्न सकेसम्म छ बुद्धिमानीसाथ यात्रा व्यवस्था. यो लिएर तपाईं बचत गर्न सक्नुहुन्छ कति तपाईं चकित सक्छ यातायातका सही मोड वा सस्ता गन्तव्यहरू छनौट. हामीलाई विश्वास; त्यहाँ साथ सबै कुराको लागि बजेट-मैत्री विकल्पहरू छन् तपाईंको यात्रा - बाट आकर्षण यातायात गर्न खाना आवास गर्न.
सम्झनु, बजेट मा यात्री "गरिब छैनन्:"तिनीहरूले व्यावहारिक ज्ञानयुक्त हुनुहुन्छ! त्यसैले तपाईं आफैलाई लागि खेद महसुस जाओ अघि, जबकि अझै पनि अचम्मको सम्झनाहरु बनाउन तपाईंले बचत हुनेछ सबै पैसा विचार. तपाईंको बजेट सीमित र अनमोल छ; त्यसैले, तपाईं हेरविचार यसलाई सम्हाल्न गर्नुपर्छ. यहाँ एक बजेट मा युरोप मा यात्रा को लागि हाम्रो शीर्ष सुझावहरू छन्:
तपाईंको मार्ग प्लट
केहि अघि आफ्नो यात्रा निर्माण. पक्कै, तपाईं को सूची भयो युरोपेली गन्तव्य हुनुपर्छ-भ्रमण. व्यावहारिक, बजेट मा युरोप यात्रा गर्दा तपाईं तिनीहरूलाई सबै भ्रमण गर्न सक्नुहुन्न, आफ्नो समय आफ्नो बजेट रूपमा सीमित छ, विशेष गरी यदि. त्यसैले बरु धक्का को सबै हेर्नका लागि, आफ्नो शीर्ष टिप्न दुई वा तीन. अब शहर तपाईं हुनुहुन्छ भने हेर्न नक्सामा जाँच विचार जडान गर्न सजिलो छन्, र के अन्य सहर भनेर मार्ग हो.
उदाहरणका लागि, तपाईं भ्रमण रुचि हुन सक्छ पेरिस र एम्स्टर्डम. मार्ग जाँच, र तपाईं ब्रसेल्स दुई बीच स्थित एक शहर हो कि देख्नुहुनेछ! छानेर कि जडान शहर, वा ती दुई बीचको बीचमा सपना गन्तव्यहरू, तपाईं आफ्नो Buck लागि थप धमाका प्राप्त गर्न सक्छन्.
जब तपाईं आरक्षित तपाईं राम्रो दरहरू प्राप्त आफ्नो होटल अग्रिम वा छात्रावास कोठा. को पहिले, राम्रो. बुद्धिमानीसाथ आवास चयन.
5-तारे होटल मा सुइट्स मतलब गर्दा पूरा सान्त्वना र लक्जरी, जब एक तंग बजेट सामना तिनीहरूले स्मार्ट विकल्प हुनुहुन्छ. यसबाहेक, एक मा रहन महंगा होटल कोठा आफ्नो पैसा को बर्बादी हुनेछ, मुख्य रूप तपाईंको यात्रा समावेश यदि घुमफिर र अन्वेषण सहर. यो तपाईं मात्र दुर्घटनामा कोठा प्रयोग र बाहिर र बारेमा आफ्नो दिन को सबै भन्दा खर्च गरिने अर्थ.
तपाईं सुरक्षित गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं आतिथ्य आदानप्रदान गएर निःशुल्क स्थानीय बस्नुहुन्थ्यो सक्छ. अन्य सस्तो आवास समावेश हस्टल कि प्रस्ताव छात्रावास-शैली सुविधाहरु. यस्तो Airbnb रूपमा अनलाइन marketplaces मा कोठा भाडा बजेट मा युरोप मा यात्रा को लागि आदर्श पनि हो.
बजेट मा युरोप यात्रा गर्दा एक स्थानीय जस्तै खान
मासु Delights युरोप मा जताततै छन्. तर तपाईं एक बजेट मा युरोप मा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, चाखलाग्दो कुरा भनेको महँगो पर्यटन स्थानहरूमा खान नखोज्नु हो. छैन रेस्टुरेन्ट बिल आफ्नो खाना बजेट तोड्न गरौं गर्छन्.
सट्टा, खान एक स्थानीय जस्तै र एक वास्तविक सांस्कृतिक प्राप्त अनुभव. खाद्य stalls र सडक खाना सबै युरोपेली शहर भन्दा हुन्, र तिनीहरूले सही हटस्पट किन्न हुनुहुन्छ प्रामाणिक भोजन. र सबै भन्दा राम्रो भाग तिनीहरूले एक मात्र खर्च हुनेछ छ केही यूरो. तपाईं भोजन मा सुरक्षित गर्न चाहनुहुन्छ भने, को किराना पसल मारा. तपाईं पकाउन गर्न हालतमा छ कि एक कोठा मा रहन हुनुहुन्छ भने, तपाईं सजिलै बनाउन सक्छ पकवान लागि सामाग्री किन्न.
रेल मा सुत्न
रेल मा सुतिरहेको गन्तव्यहरू बीच सायद मान्छे बजेट मा युरोप मा यात्रा को लागि हाम्रो मनपर्ने सुझाव मध्ये एक छ. बरु ट्रान्जिट मा मूल्यवान डेलाईट घण्टा बर्बाद को, एक रातमा रेल मा जान छनौट. यो रात को लागि एक होटल बुकिंग भन्दा छ कति सस्ता तपाईं चकित सक्छ. निश्चित, तपाईं सम्झना छौँ दृश्यहरु, तर तपाईं एक नयाँ शहर मा राम्रो-विश्राम उठ छौँ!
Ready to start traveling in Europe onabudget and एक रेल बुक? पुस्तक रेल प्रारम्भिक टिकट र सिट मा सबै भन्दा राम्रो सम्झौताहरू प्राप्त!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र केवल एउटा लिङ्क हामीलाई एक क्रेडिट दिन यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-europe-budget%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#बजेट #traveleurope budgettravel cheaptravel savemoney